Igumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabili eline-en-suite yokugezela. - I-Airbnb
Igumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabili eline-en-suite yokugezela.
West Yorkshire, England, i-United Kingdom
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-N
Igumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabili endlini yeVictorian imizuzu emi-5 ukusuka enkabeni yedolobha lase-Huddersfield kanye ne-M62. Ikamelo lokulala linegumbi lokugezela le-en-suite elinebhavu neshawa kanjalo nokufinyelela endaweni yokuphumula yezivakashi. Kukhona i-WiFi yejubane eliphezulu yamahhala, ithelevishini ekamelweni kanye nendawo yokupaka mahhala ngaphandle kwemigwaqo yezimoto ezi-2. Indlu ibuyiselwe ngendlela enambitheka ngayo inezici ezimbalwa zoqobo ezinjengama-cornice ahlotshisiwe, izindawo zomlilo namafasitela ezingilazi ezinemibala.
Kukhona indawo yokuphumula yezivakashi enezindawo zokwenza itiye / ikhofi kanye nohlu olukhulu lwezincwadi. Ibhulakufesi lase-Continental lingacelwa ngemali eyengeziwe. Izivakashi zamukelekile ukusebenzisa idekhi nengadi. Igumbi lokudlela liyatholakala ukuze usetshenziselwe ukudla okudliwayo uma kudingeka futhi kukhona indlela yokungena ekhishini yokwenza ukudla okulula okulula.
ubusuku obungu-7 e- West Yorkshire
Indawo yethu ithule naphezu kokuba iseduze nomzila omkhulu ongena e-Huddersfield. Ngaphakathi kwengxenye yemayela kukhona ukukhethwa okubanzi kwezitolo zasendaweni, abalungisa izinwele, izindawo zokudlela, imigoqo nezinye izinsiza. Indlu yethu iyibanga elifushane kakhulu ukusuka esitobhini sebhasi esinemizila engena eHuddersfield naseHalifax edolobheni. Kulabo abakhetha ukuhamba, inkaba ye-Huddersfield iqhele ngemayela elingu-1. IGreenhead Park eqhele ngemizuzu eyi-15 inezinkundla zokudlala, izinkantolo zethenisi, ikhefi, ichibi lokuhlobisa, izinhlobonhlobo zamahlamvu amahle, nokunye okuningi.
Umsingathi uzotholakala zikhathi zonke.
Hlola ezinye izinketho ezise- West Yorkshire namaphethelo